Adobe dia manolotra ny Apple M1 Beta ho an'ny Premiere Pro, Rush ary auditions | Famoronana an-tserasera
Hoy Adobe dia nanambara ny fisian'ny Adobe Premiere Pro, Premiere Rush ary Audition ho an'ny Apple M1 Systems. Vaovao iray mifandraika amin'ny vaovao iray izay vao avy niresaka momba ny Mpandrindra Windows ARM sy processeur Apple ho an'ny Adobe Lightroom.
Ity andiana fampiharana ity ny rafitra dia tonga mba hahazoany tombony betsaka amin'ny fampisehoana ary ny fahombiazan'ny angovo. Lafiny roa izay lehibe kokoa noho ny zava-dehibe ankehitriny ary ampian'i Adobe tsikelikely mba hitondra ny fampiharana Creative Cloud rehetra.
Toy izany koa i Adobe doka toy ny fampiharana horonan-tsary Creative Cloud Izy ireo dia natao mba hanao tsara indrindra ary hanatsara ny fahombiazan'ny angovo eo ambanin'ny Apple M1 Systems. Antenaina fa mandritra ny fampisehoana beta ho an'ny besinimaro dia hohatsaraina hanararaotra azy tanteraka.
Andrasana noho izany amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021 dia misy Adobe Premiere Pro, Premiere Rush, ary Audition miaraka amin'ny fanohanan'ny teratany tanteraka ny rafitra Apple M1.
La Adobe Premiere Pro beta dia misy endri-javatra fanovana lehibe ary manolotra fanampiana ho an'ny ankamaroan'ny codecs toy ny H.264, HEVC, ary ProRes. Mazava ho azy, raha mampiasa ny beta izahay dia manoro hevitra anao ny hanaovanao dika mitovy amin'ireo tetik'asa raha sanatria, satria mety hitranga ny lesoka.
Ao amin'ny beta an'ny Premiere Rush dia afaka mahita fanohanana H.264, ampio lohateny sy feo avy amin'ny trano famakiam-boky, ary hanolotra fanampiana izy io hamoronana tetikasa sy hanondranana azy ireo. Ho famaranana, ny Auditions dia efa manasongadina tombony tombony amin'ny vokam-peo marobe, ary koa ny fanatsarana hafa toy ny fampisehoana amin'ny fotoana tena izy ao amin'ny tonian'ny spectral frequency editor.
Araka ny efa nolazainay, kinova voalohany an'ny Adobe Premiere Pro, Premiere Rush, ary Audition ho an'ny Apple M1 Systems Ho tonga amin'ny tapany voalohany amin'ny 2021 izy ireo, ka amin'ny faharetana kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Adobe Premiere Pro, Premiere Rush ary Audition dia azo alaina ao amin'ny Apple M1 Systems amin'ny beta